Latest Breaking « रिपोर्टर्स नेपाल
ट्रेडिग न्यूज : #featured
“कम्युनिस्टहरू राजतन्त्रकै गर्भबाट आएजस्तो छ, कांग्रेस त थारो गाई भइहाल्यो,” : राजेन्द्र श्रेष्ठ
काठमाडौं, २३ बैशाख । आजमात्रै घोषणा भएको समाजवादी पार्टी, नेपालका शीर्ष नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ नेकपा र कांग्रेसविरुद्ध खनिएका छन् । उनले कम्युनिष्टहरु राजतन्त्रकै गर्भबाट आएको
ओलीसँग पड्किए प्रचण्ड, गणतन्त्रमा नियत खराब
काठमाडौं, २२ बैशाख । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच पार्टी एकताबारको छलफलमा भनाभन नै भएको खुलासा भएको छ ।
नयाँ शक्ति र फोरमबीच बैशाख २३ गते एकता, पार्टीको नाम समाजवादी पार्टी, नेपाल
काठमाडौं, २१ बैशाख । सत्तारुढ दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालबीच एकता हुने भएको छ । शनिबार नयाँ शक्तिको पार्टी कार्यालय बबरमहल काठमाडौंमा बसेको दुई पार्टीको
डिएसपी ढुंगेल निलम्बनमा, डाकाहरुसँग सम्पर्क !
काठमाडौं, १९ बैशाख । प्रहरी प्रधान कार्यालयले ईलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहापुरमा कार्यरत प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) कुमोध ढुंगेललाई निलम्बन गरेको छ। बिहीबार डिएसपी ढुंगेललाई निलम्बन गरेको हो। चोरी तथा डकैतीमा
पाल्पामा जन्ती बोकेको जिप दुर्घटना, पाँचको मृत्यु
काठमाडौं, १६ वैशाख। पाल्पाको निस्दी गाउँपालिकामा जन्ती बोकेको जिप दुर्घटना हुँदा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ। गाउँपालिकाको वडा नं. ७ भिरपानीकमा विवाहबाट हुवास फर्किदै गरेको लु १ ज १९४१ नम्वरको
खुल्ला मञ्चका सबै सटरमा डोजर लगाईयो (फोटोफिचर)
काठमाडौं, १४ बैशाख । खुलामञ्च अतिक्रमण गरेर बनाईएका सटर काठमाडौं महानगरपालिकाले डोजर चलाएको छ । पसल भत्काउनका लागि शनिबार नै डोजर परिचालन गरिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले
नायक सुदर्शन गौतमविरुद्ध ‘रेड कर्नर नोटिस’ जारी, मानव तस्करीको आरोप
काठमाडौं, १३ बैशाख । नेपालबाट विभिन्न देश हुँदै अमेरिकामा मानव तस्करीको आरोप लागेका ‘हिम्मतवाली’ फिल्मका नायक सुदर्शन गौतमविरुद्ध ‘रेड कर्नर नोटिस’ जारी भएको छ। साढे ८ महिनाको प्रक्रियापछि गौतमविरुद्ध ‘रेड
धादिङमा बस दुर्घटना, दुईको मृत्यु
काठमाडौं, ८ बैशाख । पृथ्वी राजमार्गको नौविसे मुग्लिन सडकखण्ड अन्र्तरगत धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका -३ सलाङघाटमा यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या दुई पुगेको छ। काठमाडौंबाट मनकामना दर्शनका लागि
बरिष्ठ पत्रकार पुष्करलाल श्रेष्ठको निधन
काठमाडौं, ४ बैशाख । नेपाल समाचारपत्र दैनिकका प्रधान सम्पादक पुष्करलाल श्रेष्ठको निधन भएको छ । थापाथलीमा रहेको नर्भिक हस्पिटलमा उपचारका क्रममा बुधबार बिहान ११ श्रेष्ठको निधन भएको हो । उनी
धरानमा बस दुर्घटना : ४ जनाको मृत्यु
धरान, २५ चैत । जिल्लाको धरानमा यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा ४ जनाको मृत्यु भएको छ। २१ जना घाइते भएका छन्। केही समयअघि धरान १३, जिरोपोइन्टमा बस दुर्घटना हुँदा चालकसहित ४
एयरपोर्टबाट ६ किलो सुन बरामद
काठमाडौं, २१ चैत । नेपाल प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट थाइ एयरवेजबाट आएका ४ जना भारतीय नागरिकको साथबाट ६ किलो सुन बरामद भएको हो । पक्राउ पर्नेमा ३ महिला र १
बुटवलको सैनामैनामा गोली चल्यो, एक जना भारतीय नागरिकको निधन
काठमाडौं, १३ चैत । रुपन्देहीको बुटवलमा आज साँझ गोली चलेको छ । गोली चल्दा भारतीय नागरिक फिरोज खानको मृत्यु भएको छ । अज्ञात समूहको गोली प्रहारबाट खानको मृत्यु भएको रुपन्देहीको
वामदेव गौतमलाई सनक चल्छ-अग्नि सापकोटा
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता अग्नी सापकोटा अध्यक्ष प्रचण्डका विश्वासपात्र हुन् । उनीसँग नेकपाको सिद्धान्त
रवि लामिछाने जेल पर्दा करिश्मा खुशी !
काठमाडौं, ३२ साउन । न्यूज २४ टेलिभिजनका पत्रकार रबि लामिछाने यतिवेला प्रहरी हिरासतमा छन् ।